October 15, 2020 316
आफुलाई ब लात्कार गर्न खोज्ने पुरुषलाई धनकुटाकी एक महिलाले खुकुरी प्र’हार गर्दा उक्त पुरुषको मृ त्यु भएको छ ।
जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका १ कि ३० वर्षकी कमला गुरुङ्ले आफुलाई व लात्कार गर्न आएका सोही स्थानका लिल वहादुर गुरुङ्लाई प्रतिकार स्वरुप खु’कुरी प्र’हार गर्दा उनको मृ त्यु भएको हो । लिल वहादुरले व लात्कार गर्न खोजेपछि जोगिने प्रयासमा महिलाले खुकुरी प्र’हार गर्दा लिल वहादुरको मृ त्यु भएको देखि’एको प्रहरीले जनाएको छ ।
झण्डै डेड वर्ष अघि श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएपछि आफ्नो छोरा सँग घरमा वस्दै आएकी ती महिला माथि मंगलवार राती ब लात्कारको प्रयास भएको थियो ।
रातको समयमा लिलवहादुरले कमलाको घरमा गई ढोका खोल्न भनेको तर भित्रबाट ढोका नखोले पछि जव’र्जस्ति ठेलेर ढोका खोलि आफुलाई ब लात्कार गर्न खोजेको ती महिलाले प्रहरीलाई वयान दिएकी जिल्ला प्रह’री कार्यलय धनकुटाका एसपी गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सोहि क्रममा खुकुरी भेटेर हानेपछि लिलवहादुर भागेका ती महिलाले वताएकी छिन । लिल वहादुर भागेपछि ती महिला पनि आफन्तकोमा गएर वसेको र रातीको घटनापछि के भएछ भनेर वुधार विहान आफन्त सँग खोजी गर्दा लिलवहादुरको श’व खोल्सिमा फेला परेको जनाईएको छ ।
मृ तकको श’व पोष्मार्ट’मका लागि जिल्ला अस्पताल धनकु’टामा राखिएको जिल्ला एसपी अधिकारीले वता’उनुभयो। उहाँका अनुसार घट’नामा संलग्न महिलालाई प्रहरी’ले नियन्त्र’णमा लिएर थप अ’नुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाई छ । – धनकुटा खबर बाट
Prevआज सुनचाँदीको भाउ कति छ ? हेर्नुहोस्
आज सुनको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्…